युगसम्बाद साप्ताहिक - नेता हुन भाषण होइन, अरू नै गुण चाहिन्छ - महेश्वर शर्मा
Saturday, 04.04.2020, 12:47am (GMT+5.5) Home Contact
नेता हुन भाषण होइन, अरू नै गुण चाहिन्छ - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 10.30.2012, 09:35am (GMT+5.5)
अरू कुनै पनि योग्यता नभए पनि बलजफत र हुल्याईं छुल्याईं गर्नसक्ने कतिपय स्वाँठहरुले समेत सांसद र मन्त्री भएर बेपत्ता पैसा कमाएको देखेकाहरुले देखासिकीमै राजनीति गर्न थालेका हुन् । त्यसैले राजनीति गर्न कुनै योग्यता चाहिंदैन भन्ने भ्रम नेता हुँ भन्नेहरुले नै फैलाएका छन् । वास्तविकता त के हो भने राजनीति गर्नेहरु अझ बढी योग्य हुनुपर्ने हो तर यहाँ नेतृत्व गर्नेहरुकै अयोग्यताले गर्दा देश अघि बढ्नुको साटो पछि घचेटिंदैछ । राज्य संचालनका क्रममा नीतिको बढी महत्व हुन्छ तर नीति निर्माणका तहमा आज अधिकांश अयोग्यहरु नै पुगेका देखिन्छन् । कुनै पनि काम अथवा योजना कार्य सफल हुनु र नहुनुमा नीति नै निर्णायक तत्व मानिन्छ । नीति ठीक छ भने सफलता र बेठीक भए असफलता हात लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
चार चौरास जोडेर तीन न तेह्राका भाषण गर्दैमा कोही पनि नेता हुँदैन । नेता हुन अर्कै विशेष गुण र योग्यता चाहिन्छ । नेताका बोलीको सही हुनुपर्छ । अहंकारी, भ्रष्टाचारी, मिथ्याचारी र मनमा मैला भएकाहरुलाई नेता भन्न सुहाउँदैन । नेतामा त ज्ञान, इमान र विवेक हुनुपर्छ । बुद्धि विवेक नभएका, केबल एकले अर्कालाई दोष दिने र गाली गरेर आफू मात्र चोखो देखिन खोज्ने धूर्तहरुको भीडलाई नेता मान्नुपर्दाको विडम्बना त देशले भोगिरहेकै छ । यही नै आजको दुर्भाग्य हो । त्यस्तैहरुले गर्दा आज देशकै अस्तित्व धरमराउने स्थितिमा पुगेको छ । यी छेउ न टुप्पाकाहरुले गर्दा देश आज दुनियाका नजरमा हेपिएको छ । असल काम गरेर होइन, विध्वंश र उधुम गर्नेहरु नेता बनेपछि यस्तै हुँदोरहेछ जो आज देशवासीले भोग्नुपरेको छ ।
लामो समयदेखि सत्ताको दाउ हालेर बसिरहेका कांग्रेस, एमालेहरु अहिलेसम्म पनि त्यसैको मेसोमा छन् । उनीहरु हिजो केके न पाइन्छ भन्दै माओवादीको पछि लागेकोमा पछुताव गर्दैछन् । अहिले माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गरी उग्रवामपन्थी सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्यो भनेर अरण्य रोदन गर्दैछन् । ‘हामी संसदीय व्यवस्था मान्न आएका होइनौं’ भनेर त माओवादीले पटकपटक भनिरहेकै छन् भने माओवादी बेलगाम हुनथाल्यो भन्ने रुवाइको के अर्थ छ ? एकाधिकारवादी राजनीतिक दर्शनका अनुयायी माओवादीलाई लगाम लगाउने शक्ति–सामथ्र्य कांग्रेस–एमालेसंग छ र ? संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गरेरै माओवादी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छ भन्ने कुरा १२ बुँदे सम्झौता गरेर भित्र्याउँदा नै होस् राख्नुपथ्र्यो, आज दोष दिनु र विलौना गर्नुको केही अर्थ छैन । कांग्रेस–एमालेले भन्दैमा माओवादीले आफ्नो उद्देश्य छोड्छ र ? माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौं भनेर घमण्ड देखाउनुको पनि अब कुनै अर्थ छैन । त्यो त उनीहरूको यहाँभित्र पस्ने दाउ थियो र उनीहरू सफल पनि भए । त्यति मात्र नभएर संसदीय परिपाटीलाई नै असफल देखाउने उनीहरूको चेष्टा जारी नै छ । नयाँ निर्वाचनका प्रसंगमा संसदको चुनाव गर्नै नचाहने माओवादीको दाउ यसैको द्योतक हो ।
यी सब राजनीतिक बेइमानी, मुख्र्याई र स्वार्थको कारणले गर्दा भएको हो । यहाँ देश वरवाद हुन लागेकोमा कतिलाई चिन्ता छ खोई ? सबै खानकै लागि मात्र लालायित देखिन्छन् । इटालीका प्रधानमन्त्रीलाई कर छलेको अभियोगमा दुई वर्ष काराबासको सजाय भयो, यहाँ भने भ्रष्टाचारीको पदोन्नति हुन्छ । यहाँ कर तिर्ने सांसद र मन्त्री कति छन् ? तिनै कर छलुवाहरुका आवाज झन चर्का छन् । सबै कुरा तिनैलाई पुगेको छैन । तिनीहरु नै भन्छन्– शासन व्यवस्था समावेशी भएन भनेर । तर २००७ सालदेखि आजसम्मका कुन मन्त्रिमण्डल र कुन संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक एवं राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशी भएन ? अभिलेख हेरेमा थाहा हुन्छ । ती निकायहरुमा कुन कुन जातका कति मान्छे परेका रहेछन् भनेर हेर्न सकिन्छ ।
आज समावेशी भएन भन्नेहरुमा पनि अधिकांश तिनै व्यक्ति देखिन्छन् जसले आजसम्म पनि जातित्वकै नाताले राज्य शक्तिको उपभोग गर्दैआएका छन् । तिनीहरु सुरुदेखि नै कहीं कुनै ठाउँमा पनि पछिपरेका छैनन् । राजनीति गर्छौं भन्ने अधिकांश कति दरिद्र देखिएका छन् भने देश विग्य्रो, जनताले दुःख पाए भन्ने छैन, केवल आफूले एकलौटी खान पाएनौं भन्ने धून र गुनासो मात्रै छ । तर यथार्थ के हो भने त्यसरी कराउनेहरु कुनै पनि क्षेत्रमा पछिपरेका छैनन् । राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रमा समेत उनीहरुकै वर्चश्व र प्रभुत्व कायम छ ।
त्यसैले यो समावेशी भएन भन्ने कुरा आधारहीन छ । हो, राजनीतिक या निजामती क्षेत्रमा कसैको बाहुल्य होला । त्यस्तै रुचि र क्षमता अनुसार सबै जात आआफ्नो योग्यताका क्षेत्रमा लागेकै छन् । यहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा जान सबै स्वतन्त्र छन्, कसैले कसैलाई छेकेको छैन भने कसरी समावेशी भएन ? क्षमता र योग्यता पुग्दैन भने आफैंले प्रयास गर्नुपर्छ । बाहुनले हिमाल चढ्न नसकेर र शेर्पाले सप्ताह पुराण वाचन गर्न सकिन भनेर समावेशी भएन भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र यहाँ सबैलाई समान अवसर प्राप्त भएकै छन् ।
केही अघिसम्म नेताहरु ‘चोर चोर मौसेरे भाइ’को स्थितिमा हुँदा ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ गरिरहेकै थिए । ठूलठूला या मालदार सम्झिएका नियुक्तिहरु सहमतिमै गोप्य डाँक बढाबढमै भएका थिए भने अरु खुद्रे नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा समेत गच्छेअनुसार सबैको भागवण्डा चलेकै थियो । तर अहिले अविश्वासको खाडल फराकिलो हुँदै गएको र एमाओवादीको एकल हालिमुहाली चलेको हुनाले त्यसलाई तोड्नका लागि फेरि सहमतिको सरकारको कुरा उठेको छ । यहाँ इमान्दारीभन्दा बेइमानीकै चकचकी चल्ने हुनाले आजको प्रमुख प्रश्न सरकारकै नेतृत्व भएको छ । न सजिलै नेतृत्व छोड्न बाबुराम तयार छन्, न त नेतृत्व नपाएसम्म कांग्रेस–एमालेले मान्न तयार छन् । यो तानातानमा सहमति या राष्ट्रिय सरकार जे भने पनि बाँडीचुँडी खाने मेलो मात्रै हो ।
आजसम्म जनता, नेता र सरकारबाट पीडित थिए र छँदैछन् भने अब कांग्रेस–एमाले पनि माओवादी पीडित भएको गथासो सुनाउँदैछन् । वास्तवमा कुन पार्टीले अर्को पार्टीलाई अघि बढोस् भन्ने चाहन्छ र माओवादीले चाहोस् ! यहाँ सबैलाई सधैं आफैंले मात्र सत्ता सुखभोग गर्ने लालसाले ग्रस्त पारेको छ । सबैतिरबाट शोषित, पीडित त जनता नै हुन् । पार्टीका नेता त एकले अर्कालाई घुक्र्याएर, धम्क्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यसै पनि माहिर छन् । त्यसैले जनता भन्दैछन्– “नेतालाई मनपरी गर्ने छूट र देशलाई कमजोर पार्ने बाहेक के लछा¥यो खै यो खोक्रो गणतन्त्रले ?” आशा गरौं जनताका कुरा सुन्ने सद्बुद्धि नेताहरुमा आवस् ।